कोट नलगाए पनि न्यायको लागि लडिरहेको छु: सृष्टि केसी | khaltinews.com
काठमाडौं । आफ्नो १६ बर्षे रहरलाग्दो जवानीमा आफ्नो आँखाको ज्योति गुमाई दृष्टिविहिन बन्नुभएकी सृष्टि केसी यतिबेला आफ्नै दुनियामा रकिङ गदैहुनुहुन्छ । आठ कक्षा अध्ययनरत छँदा आँखाको ज्योति गुमाउनुभएकी उहाँले प्रमाणपत्र तहमा सर्वोत्कृष्ट अंक हासिल गर्नुभयो यतिमात्रै नभएर २० वटा देशको भ्रमण गरिसक्नुभएको छ । इरास्मस छात्रवृत्तिमा उहाँले नर्वे, हंगेरी, फ्रान्स हुँदै बेलायतबाट चार सेमेस्टरको स्नातकोत्तर पूरा गरिसक्नुभएको छ ।
सृष्टि नाच्न, गाउन तथा कविता लेख्न रुचाउँनुहुन्छ । आफ्ना आँखाले रंगीन संसार नदेखे पनि उहाँ अरूको आँखालाई भने नृत्यबाट मनोरञ्जन प्रदान गर्नुहुन्छ । आँखाको ज्योति गुमाएपछिको जीवन भोगाइमा थुप्रै नमीठा अनुभव संगाल्नुभएकी उहाँमा शारीरिक रूपमा अशक्त भएकै भरमा अपहेलित हुनुपरेको तिक्तता पनि निकै रहेका छन् । त्यही तिक्ततालाई उहाँले ऊर्जामा परिवर्तन गर्नुभएको हो ।
गायन, नृत्य, वक्तृत्वकला एवं चित्रकलामा पोख्त सृष्टि केही वर्षअघि नृत्य प्रतियोगितामा १५ मुलुकका सहभागीलाई उछिन्दै प्रथम हुनुभएको थियो । मानिसमा भित्री चाहना र केही गर्ने संकल्प छ भने सफलता प्राप्त गर्न कठिन छैन भन्ने एउटा उदाहरण बन्नुभएको छ ।
वाल्यकलमा सवैले वकील बन्छे यो भन्ने सुन्दा उहाँले पनि आफु वकीलनै बन्ने सपना देख्नु भएको थियो तर आफ्नो आखाँको ज्योति गुमीसकेपश्चात भने वकील बन्ने सपना सकार भएन तर पनि उहाँ भन्नुहुन्छ कालो कोट नलगाए पनि न्यायको लागि लडिरहेको छु । प्रस्तुत छ सृष्टि केसी संग गरिएको कुराकानीको छोटो अंश
कोरोना महामारिको समय कसरी बिताउनुभयो ?
यो महामारिको समयलाई मैले निकै राम्रो अवसर प्राप्त गरे । नेपालको पहिलो डान्सिङ रियालिटि सो “डान्सिङ व्यीथ स्टार”मा सहभागि हुने मौका पाए । जहाँबाट मेरो पुरा नभएको सपना पुर्ण भएको अनुभव भैरहेको छ र त्यहाँबाट अलि चाडै बाहिरिन परेपनि बिभिन्न जिल्लामा मोटिभेसलनको लागी डान्सको आयोजनाहरु गरियो । यसको संगसगै अनलाईन मार्फत मोटिभेसनल स्पिचमा सहभागि भए । यो समयमा मैले निकै फाइदाहरु बटुलेकी छु ।
बाल्यकाल कस्तो रहेको थियो ?
घरकी सबैभन्दा सानी सदस्य दुइ जना दाजु र आमा बाबाको लाड प्यारमा लिप्त चुलबुले छिट्टै बोलीहाल्ने । खेलमा पनि त्यातिकै सहभागिहुनपर्ने, नाटकहरुमा सहभागिहुने गित गाउने नाच्ने एकदमै रमाइलो र लाड प्यारमा बाल्यकाल बिताए ।
बिदेशमा पढ्दाको अनुभव कस्तो रह्यो ?
विकशित देश सम्पुर्ण सेवा सुबिधा सम्पन्न केहि पढाइमा केहि अप्ठेरो पर्यो भन्ने बितिकै भोलि पल्ट कलेज पुग्दा सबै तयारी अवस्थामा हुने । पढ्नको लागी सहज होस भन्ने उदेश्यले कलेजले एकजना दृष्टि भएको सहयोगिको ब्यबस्था गरिदिएको थियो । अझ भन्नै मन लागेको कुरा एउटा के रहेको छ भने “एक दिन कलेजमा शिक्षकले तिमिलाई परेको अप्ठ्यारो केहि छ भनेर सोध्नुभयो र मैले बाटोमा हिड्न अलि सहज भएन भन्ने बितिकै दृष्टिबिहिनहरुको लागी सहजहुनेगरी एक हप्तामा बाटो निर्माण भएको थियो” जुन मेरो लागी एकदमै अविस्मरणीय रहेको छ । लाग्छ स्वर्ग भनेकै त्यही हो ।
थुपै देशहरूको भ्रमण गरिसक्नु भएको छ, अन्य देश र हाम्रो देशमा दृष्टिविहिनप्रति दृष्टिकोण कस्तो रहेको छ ?
युरोपियन देशहरूमा बिशेषतः कानुन नियमले बाँधेको हुन्छ । जसको कारणले गर्दा उनीहरूले त्यो कुरा बाहिरी रूपमा प्रस्तुत गरिरहेका हुदैंनन् । तर व्यक्तिको स्वभावको कारण गर्दा विदेशी र नेपाली भन्ने हुदैन व्यक्तिको स्वभावमा भर पर्ने हुन्छ ।
ब्लाइन्ड रक्स भन्ने संस्थाले हाल कुन–कुन क्षेत्रमा काम गरिरहेको छ ?
हामी विशेषगरी सस्ंथामा भन्दा पनि कार्य क्षेत्रमा नै पुगेर नै हामीहरू काम गरिरहेका हुन्छौ । हाम्रो संस्थाले हाल दृष्टिविहिनहरूकै आवाजलाईनै समेट्ने प्रयास गरिरहेको पनि छ । ग्रामीण क्षेत्रमा हामी आफैं नै सहयोगको लागि जाने गरिरहेका छौ ।
आज जुन ठाउँमा पुग्नुभएको छ, त्यसको मुख्य श्रेय कसलाई दिन चाहनुहुन्छ ?
सर्वप्रथम मैले आफूले आफूलाई विश्वास गरे र आफनो परिस्थितिलाई पनि शक्तिमा बदलेको छु । यसको साथसाथै परिवारको पनि निकै माया सहयोग पाएको हुनाले अझ आफू अगाडि बढ्न सहयोग भएको छ ।
युवाहरूलाई कस्तो किसिमको सन्देश दिनु हुन्छ ?
जुनसुकै कामलाई पनि आजै सम्झेर पूरा गर्न आफनो लक्ष्यमा पुग्नको लागि भोलीवादलाई हटाउन जरुरी देखिन्छ । त्यसैले प्रत्येक दिनलाई कार्यव्यस्ततामा बदल्नु पर्नेछ । काम गर्दै जादा बाधाहरु घेरै आउछन् निराश पनि हुइनछ कहिलेकाही तर काममा असफल भए भन्दैमा त्यसलाई छोड्नु हुदैन, निरन्तर गर्नुपर्दछ । सफल अवस्य भइन्छ । हार कहिल्यै नमान्नुहोस जित तपाइकै हुनेछ ।